भूटानको राजनीतिमा चिनियाँ प्रभाव | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / भूटानको राजनीतिमा चिनियाँ प्रभाव
Posted by: युगबोध in विचार November 18, 2018	0 76 Views
दक्षिण एशियामा अवस् िथत भूटान १८ हजार एक सय ४७ वर्गमिलमा फै लिएको , आठ लाख मात्र जनसंख्या भएको , उत्तरमा चीन, पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा भारतद्वारा घे रिएको एउटा सानो हिमाली मुलुक हो  । यो दे शको राजधानी थिम्पु हो  । औ पचारिकरुपमा भूटानलाई स् वतन्त्र र सार्वभौ मसत्तासम्पन्न मुलुक भनिन्छ । तर भुटानको परराष्ट्र र गृह प्रशासनको रिमो ट भारतले घुमाउछ । भूटानको जलस्रो तलगायत प्राकृतिक सम्पदामा समे त भारतले बे रो कटो क लामो हात बढाउछ । राजतन्त्रात्मक प्रणाली भएको यो मुलुकमा प्रजातन्त्र निकै महंगो छ । सन् १९९३ मा भारतको पूरै लगानीमा तीन सय ३६ मे गावाट क्षमताको चुखा जलविद्युत परियो जना सम्पन्न भएको थियो  । चुखा परियो जनामा कति लगानी भयो भन्ने तथ्यांक अहिले सम्म भारतले सार्वजनिक गरे को छै न । सन् १९९३ पछि यो परियो जनाबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये ९० प्रतिशत बिजुली भारततिर निर्यात हुन्छ ।
यसवापत भारतले भूटानलाई १३ पै सा, ५० पै सा हुदै अहिले भारतले भूटानलाई प्रतियुनिट रु. एक रो यल्टी बुझाउछ । यो दक्षिणा दिएसरहको रकम हो  । र, पनि सो रकम एउटा सत्तासिन अवस् थामा रहे को सामाजिक पक्षको पो ल्टामा मात्र पर्न गयो  । जसले भारत–भूटान व्यापार सन्तुलन र राजस् व संकलनमा प्रभाव पार्न जा“दा भूटानका एक तहका जनताको प्रतिव्यक्ति आय बढ्न गयो  । यसरी भारतले भूटानको सत्तापक्षलाई पो से र त्यो दे शको प्राकृतिक स्रो त साधनमा मात्र हो इन, त्यहाको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक चालबाजीको सा“चो आपm्नो हातमा लिदा ने पाल भाषी भूटानी आफ्नो थातथलो छो ड्न विवश भए । यसमा एउटा कारण असन्तुलित र राज्यके न्द्रित विकासको प्रभाव पनि हो  । जब यसको बिरो ध भयो ने पालको पूर्वी तराई ने पाली भाषी भूटानी शरणार्थीहरुले भरियो  । भारतले भूटानलाई अन्तराष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र मामिलासमे त आफ्नो अम्रे लाभित्र पारे पछि आफूलाई विश्वको विशाल प्रजातान्त्रिक मुलुक बताउने भारतले भूटानको निरंकुश राजतन्त्रलाई पुठ दिइरहे को छ । प्रजातन्त्रका निमित्त संघर्षरत ने पालीभाषी भुटानी जनता लखे टिदा भारत तमासा हे रे र बसिरहे को दे खिन्छ । त्यसो त अब भूटानमा पनि ‘एन्टी इण्डियन’ भावनाको विकास भइरहे को दे खिन्छ ।
सन् २०१३ मा भूटानमा सम्पन्न भएको निर्वाचन पछाडि चीन र भूटानको सम्बन्ध चुनावी मुद्दाका रुपमा अगाडि आउन थाले को थियो  । भारतको विस् तारवादी नीतिको गो लचक्करमा फसे को भूटान भन्ने दे शको विश्वका ६० दे शहरुसग कूटनीतिक सम्बन्ध छ । तर बिडम्बना नै मान्नुपर्छ अहिले सम्म चीन र भूटानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम हुन सके को छै न । अहिले सम्म भूटानमा सन् २००८, २०१३ र २०१८ गरी तीनवटा संसदीय निर्वाचनहरु सम्पन्न भएका छन् । नियन्त्रित दलीय व्यवस् था भएको भूटानमा सन् २०१८ अक्टुबर ११ तदनुरुप वि.सं २०७५ कार्तिक १ मा सम्पन्न भएको संसदीय निर्वाचनमा न्याम्रुप छो क्पा भन्ने (डिएनटी) पार्टीले कुल ४७ मध्ये ३० सिटमा विजय प्राप्त गरे को छ । अहिले यही पार्टीका अध्यक्ष डा. लो टाङ छिरिङ प्रधानमन्त्री भएका छन् । निर्वाचन प्रचारको क्रममा अहिले यही पार्टीका अध्यक्ष डा. छिरिङले भारतले भूटानसित प्रतियुनिट रु. ३ भारुमा बिजुली खरीद गरी रु. ७ भारुमा बे चिरहे को विषयलाई मूल मुद्दा बनाएका थिए । यसक्रममा डा. छिरिङले भारत र भूटानको बीचमा भएका विद्युतीय सम्झौ ताहरुको पुनरावलो कन हुनुपर्ने कुरामा जो ड दिदै आएका छन् ।
नवनिर्वाचित भूटानी प्रधानमत्री डा. छिरिङलाई भारतबिरो धी र चीन निकट भने र बिरो धीहरुले प्रचारलाई थप व्यापक बनाएका छन् । हरे क क्षे त्रमा भारतीय अम्रे लामुनि बास बस् ने भूटानमा आफ्ना एजे ण्डाअनुरुप अगाडि बढ्न डा. लो टाङ छिरिङका अगाडि साना हा“कहरु छै नन् ।
भूटानको चुनावी राजनीति अत्यन्त उतारचढावपूर्ण रहे को दे खिन्छ । कुन शक्ति शिखरमा पुग्छ कुन फे दीमा झर्छ भन्ने कुरा पत्तै हु“दै न । सन् २०१३ मा भएको पहिलो निर्वाचनमा डुक फो न्सो म छे क्पा भन्ने पार्टीले ४४ सिटमा विजय प्राप्त गरे को थियो  । यो पार्टीलाई छो टकरीमा डिपीटी भनिन्थ्यो  । प्रो चिनिया“का रुपमा चिनिन खो जे को सो पार्टीको उभारबाट त्रसित भारतले दो स्रो चरणको निर्वाचनको मुखमा एलपी ग्या“स र मट्टिते लमा दिएको अनुदान कटौ ती गर्ने घो षणा ग¥यो  । जसको परिणाम दो स्रो चरणको निर्वाचनको मुखमा एलपी ग्या“स र मट्टिते लमा दिएको अनुदान कटौ ती गर्ने घो षणा ग¥यो  । जसको परिणाम दो स्रो चरणको निर्वाचनमा पिपुल्स डे मो क्रे टिक पार्टीको (पीडीपी) को पक्षमा जनमत बौ रियो  । त्यसपश्चात पिपुल्स डे मो क्रे टिक पार्टीका ने ता छिरिङ तो क्बे पा“च वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए ।
दक्षिण एशियाको राजनीतिमा भारतको महत्वाकांक्षी यो जना नदी जडान यो जना (च्ष्खभच ष्लिपष्लन उचयवभअत) ले यो क्षे त्रको पानी कूटनीतिलाई काफी प्रभावित बनाइरहे को छ । भूटान र ने पाल माथिको पानी अतिक्रमण भारतको भावी के न्द्रीय राजनीति बन्दै गइरहे को छ । यसै गरी चीनको एक क्षे त्र एक मार्गको युरो एशियालाई मात्र हो इन, समग्र भू–गो ललाई सडक सञ्जालमा जो ड्ने चिनिया“ सपनाले पनि भूटानलाई अछुतो राख्न नसक्ने दे खिन्छ । किनभने भूटान ने पाल मार्ग हु“दै दक्षिण एशियाको मध्य भागमा प्रवे शका लागि चीन आतुर देखिन्छ ।
आफ्नो सपनामा चीन दृढ भएर अगाडि बढ्न थाल्यो भने भारतको अवरो ध विफल हुने पक्का दे खिन्छ । यस्तो परिवे शमा भूटानको राजनीतिमा प्रो चिनिया“ ‘से न्टिमे न्ट’ पै दा हुनु अस् वाभाविक हो इन । पूर्वमा नानाकिङदे खि क्वालालाम्पुर ह“ुदै सिंगापुरसम्म र पश्चिममा काशगरदे खि करा“ची हु“दै हिन्द महासागरसम्म प्रस् तावित आर्थिक मार्गहरुको रे खांकन गरे को चीन कुनमिङबाट ढाका हु“दै कलकत्ता बन्दरगाह प्रवे शको ध्याउन्नमा रहे को छ । पुर्वाे त्तर भारतका सात प्रान्तहरु जो ड्ने ‘भाले को घाटीको ’ ठीक माथि अवस् िथत भूटानको भूगो लमा नै भारत–चीन विवादित क्षे त्र दो क्लाम पर्दछ । अहिले यो भू–भागमा चीन र भारत दुबै ले सै न्य तै नाथ गराइरहे को परिदृष्यमा भूटान दक्षिण एशियाको तनावपूर्ण राजनीतिको एउटा ‘प्वाइन्ट’ रहे को दे खिन्छ । त्यसर्थ भूटान शक्ति राष्ट्रहरुको एउटा खे ल मै दान जस् तो बन्न पुग्यो भने भारतीय विस् तारवादको भूटान ढाक्ने अम्रे लालाई एउटा तुफानले सजिलै उडाउन पनि सक्छ ।
यस् तो क्षे त्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस् िथतिको आ“कलन भारतले चतुरतापूर्वक गरिरहे को छ । आफ्ना राजकीय प्रभाव कायम गनेर् ‘ब्रिटिश मो डालिटी’ बाट चल्ने गरे को भारतले भूटानमा सञ्चालित ८० प्रतिशत परियो जनाहरुमा लगानी गरे को छ । भारतीय स् वार्थमा प्रश्न उठाउने डिएनटी दल सत्तामा पुगे पछि भारतका बुद्धिजीवीहरुको प्रतिक्रिया संशयपूर्ण दे खिन्छ । भारतको उत्तरी क्षे त्रका विषयमा जानकार एसडि मुनिले एउटा आले खमार्फत भूटान भारतबाट टाढा हुन नसक्ने परिभाषा गरे का छन् । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा आएको भारतीय इच्छा विपरीतको परिणामले यसरी नै भूटानमाथि विस् तारवादी जञ्जीर कस् दै लगे भुटान पनि चीनतिर ढल्कने त हो इन ? भारत आज सन्दे हको घे रामा छ ।
भारतको कूटनीतिक आयाम भूटानको दरवारसित मात्र कसिलो दे खिन्छ । अबको आधुनिक युगमा दरबार कूटनीति स् थायी मै त्रिक कूटनीतिका रुपमा रहिरहन सक्दै न । किनभने निरङ्कुशताको जगमा उभिएको दरबार जति शक्तिशाली दे खिन्छ, त्यही मात्रामा अलो कप्रिय पनि हुन्छ । त्यस कारण अलो कप्रियतालाई वाइपास गरे र शक्तिको जगमा उभिएको कूटनीति एउटा कालखण्डमा बिल्कुल खो क्रो सावित हुन बे र लाग्दै न । सन् २०१३ को निर्वाचनमा प्रो इण्डियन दलका रुपमा परिचित पिपुल्स डे मो क्रे टिक पार्टीलाई सन् २०१८ को चुनावमा भारतले अविश्वास ग¥यो  । चिनिया“ उप–विदे शमन्त्रीले भूटानको भ्रमण गरे को विषयमा पीडिपीका ने ता तथा प्रधानमन्त्री छिरिङ तो क्बे स“ग भारतले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरे को थियो  । यो व्यवहार भारतको कूटनीतिक छुद्रता थियो  । भारतको यो छुद्रताको परिणामस् वरुप भारतले भूटानमा ठूलै मूल्य चुकाउ“दै गएको दे खिन्छ । निर्वाचन परिणाम र भूटानी बौ द्धिकहरुको प्रतिक्रियाले भूटानी जनमत भारतीय एकाधिकारको बिरो धमा जा“दै गरे को प्रष्ट छ । चीनका उप–विदे शमन्त्री खो ङ सुआऔ नले गत भाद्रमा भूटानको भ्रमण गर्दा राजा जिग्मे , तत्कालीन प्रधानमन्त्री तो क्बे र विदे शमन्त्री दाम्चो दो र्जे सित भे ट गरे का थिए । सो भे टमा सीमा विवाद र विशे षतः एक क्षे त्र एक मार्ग (इलभ द्यभति इलभ च्यबम) का विषयमा छलफल भएको कुरा चिनिया पक्षले सार्वजनिक गरे को थियो  ।
यसबाट चीन भूटानमा छद्मरुपमा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन सक्रिय रहे को सजिलै बुझिन्छ । भूटानको राजनीतिक कमान भारतको हातमा भएको हु“दा भारतको इच्छाविपरीत सामान्य कूटनीतिक पाइला चाल्ने ने ताको समे त राजनीतिक भविष्य बिग्रे को दे खिन्छ । आजसम्म भारतले जसलाई चाह्यो त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने गरे को छ । सन् २०१८ को निर्वाचन परिणाम मात्र फरक रहे को छ । पिपुल्स डे मो क्रे टिक पार्टीका ने ता छिरिङ तो क्बे मात्र हो इन सन् २०१२ मा चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बे न जियाबाओ र भूटानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्ले बीच रियो द जिनारियो मा भे टवार्ता भएको थियो  । यस भे टका अवसरमा ती दुई ने ताबीच चीन र भूटानका बीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने विषयमा सामान्य छलफल भएको कुरा प्रकाशमा आयो  । यसलाई भारतले ठूलै घटनाका रुपमा लियो  । यस पश्चात भारतले भूटानमा आफ्नो गिरो ह परिचालन ग¥यो  । थिन्ले को राजनीतिक जीवन पनि निष्प्रभावी बन्दै गयो  ।
गत कार्तिक १ गते को निर्वाचनमा भूटानमा स् थापित भारतीय भूमिकाको आलो चकका रुपमा परिचित र बौ द्धिक व्यक्ति डा. लो टाङ छिरिङ प्रधानमन्त्री बने पछि चीनस“ग कूटनीतिक सम्बन्ध स् थापित गराउनुपर्छ भन्ने जनमत बलियो हुदै गएको प्रष्ट छ तर डा. छिरिङले निर्वाचनमा उठाएका भारतले भूटानबाट सस् तो मा बिजुली खरीद गरे र महंगो मा बे चे को कुरा तथा भारत–भूटानबीच भएका विद्युत सम्झौ ताहरुको पुनरावलो कन गर्ने कुरा नया“ शिराबाट उठाएर अगाडि बढ्न उनका अगाडि ठूला चुनौ ती भने अवश्य छन् । जे हो स् भूटानमा अब बिस् तारै चीनको भूमिका र प्रभाव झांगिदै जाने सम्भावना प्रवल हु“दै गएको छ ।
ने पालका के ही शिक्षित व्यक्तिहरु, व्यापारीहरु, स्वदे शी विदे शी विश्ले षकहरु तथा के ही राजनीतिज्ञ समे तले भूटानले जलविद्युतमा निकै विकास ग¥यो , ने पाल पछि प¥यो भन्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् । भूटानले जस्तै गर्नुप¥यो पनि भन्छन् । खो लाभरि भारतलाई सुम्पे र झलमल्ल भएको भूटान आज कति अलमलमा छ ? भारतले भूटानबाट भारु ३ युनिटमा खरीद गरे को बिजुली १२० प्रतिशत नाफा खाएर बाहिर बे च्दो रहे छ । त्यहा असमान विद्युतीय सन्धि सम्झौ ताहरु भएका रहे छन् । यति कुराले भारत महाशक्ति राष्ट्रको दिशामा अगाडि बढ्ने भो तर भूटान जहाको तहीं रहने भो  । त्यसै ले झलमल्ल भूटानमा राजनीतिको के न्द्रीय एजे ण्डा विद्युत बन्न गयो  । सम्भवतः विस्तारै भूटानमा राष्ट्रिय स् वाधीनताको प्रकरण पनि अगाडि आउला । त्यसकारण हामी ने पालीले भूटान जस्तै गर्ने हो इन, भूटानबाट पाठ सिक्ने हो  । आफ्नो दे शको मुहार आफै बदल्ने हो  ।
Previous: के तपाइँ प्याजखेती गदैर् हुनुहुन्छ ?
Next: स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमको सान्दर्भिकता